Nakhu okumele ukwenze uma uthenga izimpahla online – LIVE Express
Staff Reporter | 29 October 2017 | Business, News |
Kuthiwa lilokhu likhule njalo izinga labantu asebekhetha ukuthenga izimpahla ezehlukene besebenzisa uhlelo lwa-online, okunokuthi balokhu behla benyuka beya ezitolo. Abasebenzisa lolu hlelo baluncoma ngokuba lula futhi bathi alinawo alinazo izihibe.
“Ukuthenga online kuyaqhubeka nokungenisa okukhulayo eNingizimu Afrika. Amakhasimende amaningi ahlale ethenga njalo yonke into kusukela ezintweni ezincane zasendlini kuya kokokugqoka, izipho kanye nobuchwepheshe ngokucindezela nje inkinombo,” kuchaza i-CEO ye-Credit Card kwa-FNB, uChris Labuschagne.
“Akusikhona nje kuphela ukuthi kuphephile futhi akunazihibe, ungaphinde uzuze nama-eBucks ngaso sonke isikhathi uma ngabe uthenga online nge-credit card yakho yakwa-FNB.”
Kodwa-ke kubalulekile ukuthi umuntu othenga izimpahla online ahlome ngolwazi oluzomsiza ukugcina imininingwane yekhadi lakhe iphephile ukuqinisekisa ukuthi awubi isisulu sezigelekeqe za-online.
FUNDA NALOLU DABA: Nazi izindlela ongalungisa ngazo i-credit score yakho
ULabuschagne unika amakhasimende lama thiphu okumele amakhasimende awabheke uma ngabe ethenga online ngama-credit card:
· Qinisekisa ukuthi uthenga kuma-website kanye nama-Apps athembekile.
· Ungalokothi ungene kwi-website usebenzisa i-link oyithole nge-SMS noma nge-email.
· Ungalinge ugcine (save) imininingwane yakho kanye nemininingwane yasebhange kwi-website yesitolo othenga kusona. Uma ngabe lokhu kuzenzakalela, gcindezela inkinobho (button) ethi cha (No).
· Khumbula njalo ukuphuma (log off) ngokushesha uma usuqede ukuthenga.
· Hlale uqinisekisa ukuthi une-anti-virus software yakamuva kwi-computer yakho noma kumakhalekhukhwini wakho uma ngabe ikhona indlela.
· Ungalinge unikezele ngemininingwane yakho ye-credit card ngaphandle uma kunguwena oqale uhlelo lokukhokha.
· Uma ngabe uyikhasimende lakwa-FNB qinisekisa ukuthi imininingwane yakho othintwa kuyona iqondile futhi iyasebenza ukuze uzothintwa uma ngabe kunemali ephuma kwi-account yakho.
Ngale kwalokho, okunye okubalulekile ongakwenza ukuthi wenze isiqiniseko sokuthi iyasebenza i-Online Secure yakho ukuze ushayele isipikili sokugcina kwezokuphepha. Lolu hlelo lusebenza ngokuthi lukhiqiza inombolo eyimfihlo esetshenziswa kanye kuphela (One Time Pin) nethunyelwa kuwena uma ngabe usuqede ukuthenga. Le nombolo eyimfihlo iyona edingakalayo ngaphambi kokuba kuphothulwe uhlelo lokuthenga.
ISEXWAYISO: Ngabaqola abakhahlanyezwe yizikhukhula eThekwini